समाचार Archives - Sangam Saving & Credit Cooperative Society Ltd.
Home>News & Notice>समाचार
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १२:५४ १३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १२:५४ / संगम
प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्रिबाट संगम प्लाजाको भवन उद्घाटन हुँदै
प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्रि डोरमणी पौडेलबाट संगम सहकारीको नवनिर्मित भवन संगम प्लाजाको भोलि मंगलबार उद्घाटन हुने भएको छ । सहकारीले विगत २२ वर्षदेखि घरभाडामा लिई सहकारी संचालन गर्दै आईरहेकोमा भोलि मंगलबारदेखि सहकारीले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरिने छ । उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद नारायणप्रसाद खतिवडा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष केबी उप्रेती, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद …
१७ मंसिर २०७५, सोमबार १३:०७ १७ मंसिर २०७५, सोमबार १३:०७ / संगम
आमाको माया छात्रावासलाई भाँडाकुँडा वितरण
संगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विदुरस्थित आमाको माया नामक छात्रावासलाई भाँडाकुँडा वितरण गरेको छ । जिल्ला सहकारी संघका पुर्व अध्यक्ष बैकुण्ठ मिश्र र सहकारीका अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा छात्रावासका २० विद्यार्थीहरुलाई थाल, गिलास, चम्चा र बटुका वितरण गर्नुभएको छ । साथै खाना पकाउनको लागि ३ वटा ६ लिटरको प्रेसर …